तपाईंको सामग्री रणनीतिको साथ पृष्ठदृश्य बढाउने 10 तरिकाहरू Martech Zone
शुक्रबार, जनवरी 2, 2015 Douglas Karr
राम्रो सल्लाह अनन्त छ किनकि यस इन्फोग्राफिकमा जानकारी छ। BitRebels को डायना एडम्स सँगै एक सूची राख्नु भयो तपाईंको पोष्टहरूमा पृष्ठदृश्यहरू सुपरचार्ज गर्नका लागि 10 तरिकाहरू र नाउ सोर्सिंग यसलाई सुन्दर इन्फोग्राफिकमा परिणत गरियो।
सल्लाह सीधा छ:
राम्रो सामग्री बारम्बार पोस्ट गर्नुहोस् (हो, मलाई थाहा छ हामी बिदाको बिदामा गयौं)।
तपाईंको पोष्टहरू साझेदारी योग्य बनाउनुहोस् - हामीलाई मन पर्छ WordPress को लागी सजिलो सामाजिक साझेदारी!
सामग्री निर्माणको लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् - हामी मार्फत धेरै शीर्षकहरूको लागि सतर्कता सेटअप छ मेल्टवटर र वास्तव मा हामी साझा को लागी प्राप्त जानकारी को गहराई र समयबद्धता मन पर्छ।
अतिथि लेखकहरू स्वीकार्नुहोस् - तर होसियार!
एसईओ - खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन अझै महत्त्वपूर्ण छ तर यसलाई ओभरडेसन नगर्नुहोस्। यहाँ छन् हाम्रा पोस्टहरू अनुकूलन गर्नका लागि हामी लिन्छौं.
प्रत्येक शब्द प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले सम्पादन गर्नुहोस् र प्रूफ्रेड गर्नुहोस् - उफ् ... हामी यहाँ असफल हुन्छौं। मैले मेरो अन्तिम पोष्टमा भर्खरै फिक्स गरेको केहि डुजीहरू थिए। हामी सम्पादक भएको विचार संग खेल्यौं, शायद यस वर्ष!
लिंक भवन (तर तपाइँले सोच्नुभएको तरिकामा होइन) - मलाई यो शब्द मनपर्दछ लिंक कमाई बाट साइट रणनीति। तिनीहरू अधिक पृष्ठ दृश्यहरू ड्राइभ गर्न प्रासंगिक आन्तरिक लिंकहरू छलफल गर्दछन् - हामी मनपराउँछौं जेटप्याकको सम्बन्धित पोस्ट कार्यक्षमताका लागि!
ईमेल मार्केटिंग सही तरिका - यसैले हामीले निर्माण र प्रयोग गरेका छौं सर्कप्रेस!
लामो पोष्ट बिच्छेद गर्नुहोस् - हामीले ती अधिक गर्न आवश्यक पर्दछ तर म इमान्दार हुनेछु, म १०+ क्लिक लेखहरू घृणा गर्दछु जुन केवल पृष्ठ दृश्यहरू ड्राइभि। गर्दै र तपाईंको पाठकहरूलाई उत्तेजित पार्दै छ।
सामाजिक मिडिया रचनात्मक प्रयोग गर्नुहोस् - यदि हामीसँग अधिक समय छ भने हामी निश्चित रूपमा हाम्रो पदहरूको लागि अझ राम्रो प्रतिनिधि चित्रित छविहरूमा काम गर्दछौं र त्यसपछि प्रत्येक सामाजिक आउटलेटलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछौं।
टैग: ब्लग अप्टिमाइजेसनब्लग पोष्टहरूसर्कलसामग्री क्यामेरासजिलो सामाजिक शेयर बटनइमेल मार्केटिङअतिथि लेखकपृष्ठ दृश्य बढाउनुहोस्लिंक निर्माणलामो पोष्टहरूपोष्ट फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धित लेखएसईओसाझेदारी योग्यसामाजिक संजाल
के फेसबुक लिंक्डइनलाई ब्यापार नेटवर्कि ?का लागि तुलना गर्छ?
तामास टोरोक (@torok_tomi)
डिसे 1, 2015 मा 8: 06 AM
यो वास्तवमै राम्रो इन्फोग्राफिक हो। डग साझा गर्न को लागी धन्यवाद!
जहाँसम्म मैले देखेको वेबसाइटमा पृष्ठ दृश्य बढाउन दुई तरिकाहरू छन्:
विस्तृत मार्ग (नयाँ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दै)।
गहन तरिका: अवस्थित पाठकहरूलाई अझ बढी पढ्न लोभ्याउनुहोस् (पृष्ठदृश्य / सत्र सुधार गर्दै
हामी भर्खरै एक पोष्ट प्रकाशित जुन "गहन मार्ग" मा केन्द्रित छ, केहि कार्यक्षम सुझावहरू सहित।
मलाई लाग्छ कि मैले यस लेखलाई इन्फोग्राफिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। 🙂
डिसे 1, 2015 मा 8: 28 AM
मेरो विचारमा त्यो सामग्री इन्फोग्राफोरको योग्य छ, टामास!